Tchaja yako Apple Tarisa chero kupi neiyi keychain kubva kuChoetech | Ndinobva mac
Tchaja yako Apple Tarisa chero kupi neiyi keychain kubva kuChoetech
Imwe yesarudzo dzatinadzo nhasi kubhadharisa iyo Apple Watch inotakurika uye yakabva kuruoko rweChoetech. Muchiitiko ichi ndicho chinokiya chinobvumira kutakura kuenda kunzvimbo ipi neipi uye icho chinopa mukana wekuchaja wachi yedu. Ichi chishongedzo icho zviri pachena kuti Apple yakasimbiswa (MFi) iri 900 mAh inotakurika bhatiri rekunze izvo zvinotibvumidza kubhadharisa yedu Apple Watch.
Choetech's inotakurika simba bhengi inoenderana neese Apple Watch mamodheru uye ese saizi. Iine huremu hwemagiramu zana negumi nesere saka inotakurika zvachose uye inobvumira wachi kubhadhariswa chero kupi, kungave kumba, hofisi, gomo, mota, nezvimwe… Mikana yainopa haina magumo.
Tora chako Choetech charger pano pamutengo wakanakisa
1 Wedzera chiratidzo chechaji LED inoshanda sey bhatani rekuvhara uye rekudzima
2 Mukati uye zvimwe zvekuchengetedza zveiyi T313 charger
3 Technical data yeiyi Choetech T313
Wedzera chiratidzo chechaji LED inoshanda sey bhatani rekuvhara uye rekudzima
Kumanikidza pairi kunovhenekera anosvika mana ebhuruu mwenje mwenje inobvumidza mushandisi kuziva mamiriro ekuchaja ebhatiri reChoetech. Mune ino kesi iyo T313 modhi Ndiro zita ravakaripa, isu tatoziva kuti mune iyi iyo firm haina kunyanya kuomarara uye ivo vakasarudza iri zita remuenzaniso.
Uye zvakare, bhatani iri rinoshandiswa kumisikidza kana kuita kuti bhatiri risashanda. Patinodzvanya marambi eLED anobatidza uye Isu tinogona ikozvino kubhadharisa yedu Apple Watch tichisiya izvi pamusoro. Kana tangoibvisa, tinongofanirwa kubaya nekubata bhatani kudzima bhatiri.
Bhatiri rinozvimisa kana mushure mekushandisa kumwe hatibatise bhatani saka hatizove nezvinetso zvekuregedza mune izvi asi zvinokurudzirwa kuidzima nekubata bhatani remagetsi kwemasekonzi matatu. Nemwenje mina pane isu tine pakati pe75 uye 100% yechaji, nematatu iyo ichatipa pakati pe50 uye 75% kubhadharisa, 2 mwenje iri pakati pe25 ne50% uye 1 mwenje wechiedza pakati pe1 ne25%.
Mukati uye zvimwe zvekuchengetedza zveiyi T313 charger
Mubhokisi tinowana bhatani rekiyi uye nemirairo yekushandisa. Iyi charger haiwedzeri tambo yekuchaja kana chero chinhu chakadai, ingori bhatiri pamwe chete nekiyi yekiyi nemirairo. Kubva kuChoetech zvinokurudzirwa usarova kana kuita kuti bhatiri rinyorove sezvo inogona kukuvara.
Zvakare imwezve yakakosha mhedzisiro yekutarisa ndeyekuti ichi chichava chimbi chimbi yeApple Watch, saka hatimbofaniri kusiya tichichaja wachi husiku huno pajaja iyi sezvo isingadzime otomatiki uye tinogona kukuvadza bhatiri rechishandiso.
Tenga yako Choetech kuchaja base pano
Technical data yeiyi Choetech T313
Mune ino kesi iri bhatiri rekunze iro rinopa iyo 900 naRaama kunonyanyisa chinzvimbo, inobatanidza microUSB padivi iyo inoshandiswa kuchaja bhatiri, yekuisa 5V / 1A uye kuburitsa 5V / 0,4A. Kurudziro yekushandiswa kweiri bhatiri ndeyekuti ndeyezviitiko zvatisingakwanise kuwana chaja yekutanga.
Mupfungwa iyi, mutoro unobvumidza Apple Watch yedu kuzadzikiswa pazviitiko zviviri zvakanyanya, saka tinogona kubhadharisa zvizere wachi 1 kana mbiri zvakanyanya.
Inotakurika uye yakapusa kushandisa
Inobvumira mhosva mbiri dzakazara
HAIMISI kuchaja zvinoenderana nemugadziri wacho pachawo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tchaja yako Apple Tarisa chero kupi neiyi keychain kubva kuChoetech
Inoshamisa inovandudzwa kuti ienderane neApple Silicon
Apple's iWork suite inogadziridzwa yeMacOS Big Sur